Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment नाम मात्रका कोभिड अस्पताल, उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँदै संक्रमित - Pnpkhabar.com
काठमाडौं , असोज ३० : कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ। संक्रमणको प्रारम्भिक अवस्थामा तयार पारिएका कोभिड अस्पताल अहिले तीव्र दरमा संक्रमित बढेपछि भर्ना लिएर उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
कटवालले अक्सिजनसहितको बेडका लागि निकै पहल गरे तर पाइएन। प्रतिष्ठानबाट अक्सिजनसहितको बेड नभएको जानकारी पाएपछि विजयपुर अस्पतालबाट अक्सिजन सिलिन्डर घरमा ल्याएर दिइएका ती संक्रमितलाई राति सास फेर्न कठिन भएपछि प्रतिष्ठानमा लगियो। प्रतिष्ठानमा पु(याएको केही समयमै ती संक्रमितको मृ’त्यु भयो।
धरान १६ का करिब ६० वर्षीय संक्रमितलाई पनि बुधबार साँझ सास फेर्न गाह्रो भयो। प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा लैजान परिवारजनले निकै कोसिस गरे। तर अस्पतालले बेड खाली नभएको जानकारी गरायो। ती संक्रमितको राति नै घरमा मृ’त्यु भयो।
त्यहाँ भेन्टिलेटरको त कुरै छाडौं, सामान्य बेडसमेत नपाएपछि ती संक्रमितलाई विराटनगर लगियो। ती संक्रमितको बुधबार राति नै कोसी कोडिभ उपचार केन्द्रमा मृ’त्यु भएको धरान १५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले बताए।
प्रतिष्ठानमा आएका कोभिडका बिरामी व्यवस्थापन समन्वयकर्ता डा. इन्द्र लिम्बुले अक्सिजनसहितका बेड कम भएको विषयमा पदाधिकारीलाई जानकारी गराइसकेको बताए। धरानका मेयर तिलक राईले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पटकपटक आइसियू, भेन्टिलेटर थप गर्न आग्रह गरे पनि पहल नगरेको बताए। प्रतिष्ठानले सही रुपमा व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
आइसियू नपाउँदा ज्या’न गयो
अर्घाखाँचीबाट उपचारका लागि बुटवल ल्याइएका कोरोना संक्रमितको पनि उपचार नपाएर मृ’त्यु भएको छ। अर्घाखाँची भूमिकास्थान ९ का ७३ वर्षीय पुरुषको बुटवलका अस्पतालमा आयसियू बेड खाली नभएपछि बिहीबार बिहान दाङ लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृ’त्यु भएको हो।
ती पुरुषलाई मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका बुधबार बुटवल ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका ती संक्रमितलाई आइसियू बेड खाली नभएकाले आइसोलेसन वार्डमै राखिएको थियो।
स्वास्थ्य अवस्था थप बिग्रिँदै गएपछि ती संक्रमितलाई बुधबार राति दाङको बेलझुन्डीस्थित कोरोना अस्पतालमा रेफर गरिएको प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सूचना अधिकृत डा. विष्णु गौतमले बताए। दाङ लैजाने क्रममा बिहीबार बिहान पौने ८ बजेतिर ती संक्रमितको बाटोमै मृत्यु भएको जानकारी आएको गौतमले बताए।
उपचारै नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाइरहँदा र लक्षणसहितका संक्रमित थपिइरहँदा पनि प्रदेश सरकारले अस्पतालको क्षमता बिस्तारमा भने ध्यान दिएकै छैन। चैतमा तयार गरिएका संरचनामा नै अहिलेसम्म काम चलाइएको छ। सुरुमा एक सय बेडको भनेर प्रचार गरिएको बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालमा चारवटा भेन्टिलेटसहित १६ वटा आइसियू शड्ढया र ३२ वटा आइसोलेसन शड्ढया छन्।
ती शड्ढया सबै भरिएका छन्। संक्रमितको उपचारका लागि भैरहवामा ५ शड्ढया आइसियू् र अन्य १७ शड्ढया छन्। तर त्यहाँ जनशक्ति नहुँदा संक्रमितले उपचार पाउन नसकेको चिकित्सक बताउँछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा रोहित राई र रेखा भुसालले लेखेका छन् ।